I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali beBhola eKhatywayo baseBelgian I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; "Ninja". Ibali lethu leRadja Nainggolan yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch engaziwayo malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba nguyena wezona zihamba phambili kunye nezigqibeleleyo eziseYurophu kodwa bambalwa bacinga i-Biography kaRadga Nainggolan enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Radja Nainggolan wazalwa ngomhla we-4th Meyi 1988 e-Antwerp, eBelgium. Wazalelwa kumama wakhe osekupheleni, uLizi Bogaerts uNainggolan noyise, uMarius Nainggolan. Bambiza ngokuthi uRadja oko kuthetha "UKumkani". URadga wazalelwa amawele. Wakhulela kunye nabazalwana bakhe abathathu kunye noodadewabo, obizwa ngokuthi nguRiana Nainggolan. Ngaphantsi kweefoto zabo zobuntwana.
EBelgium, wakhulela kwisizwe saseFrance kodwa wabambelela kwimvelaphi yakhe yase-Indonesian. Ngeengcambu, ungumntu wase-Indonesia waseBatak kunye nenkolo, ilungu leBandla lamaProtestanti lamaBatak.
U-Radja wayesakhula amaRoma Katolika kwaye uthetha isiDatshi, isiNgesi nesiNtaliyane ngokufanelekileyo, kunye nokuqonda isiFrentshi. Njengenkwenkwe encinci, uRadja wabona ubungqina obudlulayo phakathi kwabazali bakhe. Uyise waba nesibindi ephuma kwintsapho, waphuma eBelgium waza wabuya eIndonesia. U-Radja, abantakwabo kunye nonina bafanele baphile ngokwabo, bengenakho imali. Naliphi na umntwana oye waphila ngekhefu lomzali uya kuqonda kakuhle intlungu engqondweni enokuyenza. Oku kwakuyimiphumo engqondweni yengqondo kuRadja. Imiphumo ngokucacileyo yayinefuthe ekuphuhlisweni kwakhe awayekunyamezela ngexesha lokuzalwa kwakhe.
U-Radja kunye nodadewabo, iRaana ukhuthazwe ngumama wakhe ukulwa nebhola ecinga ukuba nayiphi na okanye bobabini bobabili baphumelela. Ngaphezu koko, bekwazi amandla abo kunye nalapho bevela khona, uLizi Nainggolan wabona ibhola njengesiqhelo sokuba abantwana bakhe baphume kwintlupheko.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
Ukuthanda kukaRadja kwebhola yaqala xa wayeneminyaka emihlanu. Ngaphandle koodadewabo, waqala ukudlala eTubantia Borgehout, iqela elincinane elivela kwidolophu yakubo. Ngeminyaka eyi-10, wathuthela eJalimane eBeerschot, iqela laseBelgium. Yona yakuba xa eqonda ukuba ibhola yeyona nto yayiyixesha elizayo kuye kunye namawele akhe amnandi. Ukuze abe neengxaki kwaye angadumisi unina, uRadja akazange ayeke ukufunda. Bobabini kunye noodadewabo, iRaana yayisenyangweni yabo kwiklasi.
U-Radja wahlala kwiGerminal Beerschot kwaze kwaba yi2005, xa ephawulwe nguAllyandro Beltrami owamnceda ukuba ahambe kwiqela le-Italian Serie B uPacac ukuba abe nomphetho olula kumsebenzi wakhe wobutsha. Emva komsebenzi wakhe wobutsha, ukhuthazwe kwiqela lakhe eliphezulu. Kwi-2010, wathuthela eCagliari apho wayedlala khona ixesha leenyanga ezintathu njengento engabonakaliyo yokuqala.
Ukusebenza kwakhe kunye Rossoblu wamenza udlalwa ngokukhethekileyo phakathi kwabalandeli bakhe, owamthiya kwiluhlu oluphezulu lwe-11 oluquka abadlali ababalaseleyo kwimbali yeqela leSardinia. Oku kwabangela ukuba amaRoma aye kwiinkonzo zakhe kwi-2014. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ibhola impela imithi yegolide kwiRadja. Indawo apho wathola umthunzi kunye thuthuzela kude neengxaki zakhe. Mhlawumbi, omnye umthi wegolide oye waletha umthunzi omningi kunye nentuthuzelo udibana nomfazi wakhe othandekayo, uClaudia.
UClaudia Nainggolan Lai ochazwe ngezantsi ngumfazi kaRadja Nainggolan. Uyinto elula, phantsi emhlabeni kunye nenenekazi ethandekayo engabonakaliyo ubomi bakhe bemihla ngemihla.
Uchaza indlela adibana ngayo noRadga esithi ..."Ndidibana noRadja eCagliari kwaye kwakuyintando yokuqala. Xa ndafunda emva kweenyanga ezimbini ukuba wayengumdlali webhola, ndifuna ukuyeka. Ndiyazi ukuba ubomi bebhola lebhola lebhola lixakekile, ngakumbi, baninzi abanomdla. Ngaloo xesha, ndandisebenza kwindawo yokuthenga i-full time time, i-little it still miss it. Njengemisipha njengoko wayebukeka, ndabona ukunyaniseka njengoko wayandixelele ukuba wandithandile, ngokumangalisayo nakwabokuqala. Xa wandixelela ukuba wayeya eRoma, andizange ndizithabathe kakuhle. ERoma, wonke umntu ubukeka kakuhle egqoke, ngokungafani neCagliari. Kwandithatha ixesha ngaphambi kokuba ndiguqule. Emva konyaka, ndaqalisa ukuphuma kunye nezina. Ndisayi kuphinda ndibe nobomi bokuqala, apho ndafumana inkululeko eninzi yokwenza izinto ezithile. "
Bobabini uClaudia noRadja Nainggolan banquma ukubopha iqhina kwi-2011. Ngezantsi umfanekiso wabo womtshato owenziwe kwimvelaphi ekhethekileyo yeCinecittà World, ipaki yokuzonwabisa yaseCompel Romano, eItali.
Umtshato wabo wabusiswa ngokukhawuleza kunye neziqhamo zesisu. U-Aysha Nainggolan intombi yabo yazalwa ngomhla we-30th kaJanuwari 2012.
UClaudia uyakuthanda ulandele uthando lwakhe, uRadja Nainggolan, kwinqununu entsha ye-adventure kunye nomntwana wabo obonakala kancinci kancinane kumfanekiso apha ngezantsi.
Esi sibini siye sabona ixesha lokunciphisa umtshato nangethuba lokuphuma kwaye lidlulile. Kungekudala, esi sibini sasihamba ngeengxabano ezininzi ezixeliweyo kwiindaba zoluntu.
Amapolisa aseNtaliyali agxininisa amacala athetha noRadja Nainggolan ngenxa yokuphathwa kakubi, ukusongelwa nobudlova kumfazi wakhe. Claudia. Ngethamsanqa, baye bahlaziya ukungafani kwabo.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Ukuqala, U-Radja unegazi likaBatak kuyise, uMarianus Nainggolan ophuma e-Indonesia. Kuyafaneleka ukuchaza ukuba uRadja Nainggloan uvela kwimvelaphi yentsapho ehluphekileyo yonke into enombulelo kuyise, uMarius owashiya ilizwe lakhe, e-Indonesia ngokuthemba ukuba enze enkulu eBelgium kuphela ukuba afune ukuba ubomi bube nzima ukuba ahambe eBelgium.
Oku kwabangela ukuba uMarianus Nainggolan ukuba ubuyele e-Indonesia ukuze aqhubeke neshishini lakhe. Namhlanje umsebenzi wakhe onzima uhlawule., Ngoxa unyana wakhe nentombi yakhe yenze ibhola ekhatywayo, uMaranus ngokwakhe waba ngumrhwebi kwisiqithi saseBali.
KuPiacenza kwakhona Radja wahlangana noyise Ngokungafani nabanye abadlali bebhola Deli Ali.
Ixesha lenzeke ngasekupheleni kwe2007 ai-13 iminyaka. "Ekugqibeleni sidibana kwakhona. UPapa uvela eBali ukuya eItali ukuze ndibone noRiana " Utsho uRadja ongazange abambelele izono zikayise entliziyweni yakhe.
Umama: Unina kaRadja ungoBelgium ngokuvela. Ngaphambi komtshato, wayebizwa okokuqala, uLizi Bogaerts. ULizi watshata noMarius waza waguqula igama lakhe ngeNainggolan. Ngelishwa, uLizi wasweleka kwi-2010, wayeneminyaka emithathu emva kokuba umyeni wakhe abuyele ekushiyekeni. Emva kokufa kwakhe, uRadja wabhala amaphiko amabini amakhulu emhlane wakhe kunye nemihla yokuzalwa nokufa kwakhe. Njengoko kuboniswe ngezantsi. Enyanisweni, uRadja unembuyiselo yakhe ngokupheleleyo kunina.
Usisi: URiana Nainggolan yiwele eliphambili kumzalwana wakhe wamawele, uRadja. Wazalelwa emini kunomntakwabo e-Antwerp, ngoMeyi 3, 1988.
Njengoko kuchazwe ekuqaleni, umhla wokuzalwa komntakwabo ngu-4th of May, 1988. Udadewabo kaRadja, uRiana Nainggolan, njengomntakwabo naye udlala njenge-AS Roma ibhinqa lebhola lebhola njengokuba ngexesha lokubhala. Ukwabelana naye ibali lokulahlwa nguyise ongeke amshiye yena kuphela kodwa intsapho yakhe kwiimeko ezinobungozi njengomntwana.
Ngaphambi kokuba eze eRom, uRiana Nainggolan wayesebenza ngokukhawuleza kwiklabhu yebhola yebhola yaseBelgium, iKontich. Ukhokele iqela lakhe ukuba lidume ukhuphiswano lwesizwe eBelgium.
Ubhuti: UManuel Noboa echazwe ngezantsi ngu-half-brother of Radja Nainggolan. Into yokuqala yokwazi ngaye yinto yokuba iNaboa yi-Fan Fan.
U-Radja u-half-brother u-Manuel Noboa uye watshela i-press; "Ndiye ndadla ngokucacileyo kwaye kucacile kwiimeko ezininzi ukuba umntakwethu uRadja, kufuneka ahambe e-Chelsea. INkulumbuso League yindawo efanelekileyo yokumelana nomoya. Ngelishwa, uthanda iRoma kakhulu. "
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iimpawu zeTattoo
U-Radja Nainggolan, waseBelgium eneengcambu zesi-Indonesian, ngokuqinisekileyo, ungumntu onomfashini. Ukususela ekufikeni eRomania kwi-2014, iinombolo zakhe zebhola zanda ngonyaka. Akayimi kuphela umdlalo wakhe kwintsimi kodwa ngenxa yeembonakalo zakhe ezintle kunye namathambo angenakubalwa emzimbeni wakhe wonke ngokwenene oza kunye nobuhlungu obukhulu.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iqoqo leTattoo
Kwimiba-ndlebe edibeneyo, uye wavakalisa ukuba zonke izithambo zakhe zinentsingiselo kwaye zizodwa kuye, ngakumbi abo bazinikezele kunina.
Ama-Asides ekhangele i-hairstyle yakhe, Ukuba senza i-radiography ephezulu-phantsi kweRadja Nainggolan, siyifumana iparadesi egcwele imizobo, ezinye zihlanganiswe ezintsha, njengaleyo entanyeni efundwayo; "Isiqalo" (Isiqalo). Kwakhona, umhla ekubalwe ngawo amaRoma amaqela akhe okuqala ePiacenza iye yatshintshwa yintliziyo enamaphiko ebeka intamo yaseBelgium. Bona ngezantsi;
Okubonakala ngakumbi kwingxenyeni yangaphambili yomzimba yimiyalezo enamandla entanyeni yakhe. Lo luhlobo oluhle olukhulu.
Kukho inyoka ende ehamba ngeqhosha layo kwaye phakathi kwayo inothambo ngesiNgesi: "Phila ngaphandle kokuzenza. Uthando ngaphandle kokuxhomekeka. Mamela ngaphandle kokukhusela. Thetha ngaphandle kokucasula ". Ngaphezulu inyoka inombhalo olandelayo: "Olunye ubomi, inqwenela enye" ​​(Enye ubomi, enye inqwenela).
I-Nainggolan inentente eluhlaza kwisandla sayo sobunxele kunye neBuddha eboniswe ngezantsi. Ngaphezulu kwetente yintyatyambo ye-lotus. Unalo igama lentombi yakhe yokuqala "ALISA" kwi-forearm yengalo yesobunxele kunye neenkwenkwezi eziliqela. Ngaloo ngalo, unalo igama lonina kwisiLwimi sase-Elvish.
Ekufutshane nesithupha, uRadja unedayisi enye, enye inombolo ye5 (Intsingiselo MAY, inyanga yakhe yokuzalwa) kunye nezinye, inombolo ye4, (Intsingiselo, wazalwa ngosuku lwe-4th ka-Meyi). Kananjalo unombhalo othi ... "Ukuthanda ukunqoba" (Ndiyathanda ukunqoba) ngakwesobunxele. Ngesandla sakhe sokunene, kukho enye ithi ..."Yithiya ukulahlekelwa" (ndiyakuzonda ukulahleka).
U-Radja unobumba obuncinane emlenzeni wakhe. Kwinquma elungileyo, uthathe umboniso ngekhamera kunye ne-initials RN4. Okubonakala ngakumbi kwiphepha elingezansi yinkwenkwe ekhwankqisayo ekhondeni lakhe lasekhohlo.
Kule ithole, unesizotya 'ninja' kunye nenombolo 4. Ku-shin yakhe iqulethe igama loodade wakhe waseTshayina nakwi-ankle, isimboli yedola kunye "Las Vegas".
Ngomlenze wesobunxele uqulethe ibhokisi elincinci (elixhasayo) nangaphambili, ikrele liso linye.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
U-Radja Nainggolan unelungelo elilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla: Unokwethenjelwa, isigulane, isisigxina, sizinzile naphezu kweembonakalo zakhe ezintle.
Ubuthathaka: Unokuba unenkani, unobungozi kwaye unganakulinganiswa.
Yintoni uRajja ayithandayo: Tattoos, ukuba neenwele ezahlukileyo zibukeka, ukulima, umculo, uthando, iimpahla eziphezulu kunye nokusebenza ngezandla.
Yintoni uRaja engathandiyo: Utshintsho olukhawulezileyo, ubudlelwane obunzima, ukungakhuselekanga kwanaluphi na uhlobo kunye nezindwangu zokwenziwa.
Isishwankathelo, uRajadi uyasebenza kwaye ulungelelanise. Ungomntu othanda ukuvuna iziqhamo zomsebenzi wakhe. Uvalelwa ukuba kufuneka ujikelezwe ngothando kunye nobuhle kwaye uqwalasele umnqweno kwaye ubonwe ebaluleke kakhulu kuyo yonke into. U-Nainggolan ulungele ukunyamezela aze anamathele ekukhethweni kwakhe ade ade afumaneke ukwaneliseka.
I-Radja Nainggolan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -ukutshaya
Uthe wathetha ngokunyanisekileyo ngokutshaya ugwayi phakathi kweengxelo esandula kutshitshiswa ngumqeqeshi waseBelgium uRoberto Martinez ngenxa yomkhwa wakhe.
'Andiyintloni kuba ndimsi kwaye andikaze ndifihle le mkhuba wam,' UNainggolan utshele abaphephandaba ngaphandle kwekampu yoqeqesho eBelgium. "Ndiyazi ukuba ndimele ndibe ngumzekelo omhle, ndinabantwana ... Kodwa mna nje ngumdlali webhola lebhola, ndenza umsebenzi wam. Wonke umntu uyazi ukuba ndimsi kwaye andinakukufihla, kodwa andinamahloni.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iRajaja Nainggolan yabantwana bebali kunye neNewold Biography. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-Divock Origi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali le-Axel Witsel yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Mousa Dembele Ibali loBuntwana kunye neNqaku leMbiniso ye-Moldsa
IJan Vertonghen Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Kevin De Bruyne Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Eden Hazard Ibali lebantwana kunye ne-Untold Biography Facts